Weerarkii Norway: 1 sano ka dib maxaa is beday? | Somaliska
Maanta waa sanadguuradii kowaad ee ka soo wareegtay markii nin cadaan argagixiso ah uu bombaano ku qarxiyay xafiiska raysal wasaaraha Norway, ka dibna intuu doon qaatay 69 qof ku dilay jaziirada Utøya ee ku taala duleedka caasimada Oslo.
Ka dib weerarka arxan darada ah ee lagu xasuuqay dhalinyaro ka tirsaneyd xisbiga talada haya ee Norway oo ay ku jiraan caruur Soomaaliyeed. Ayaa waxaa gacanta lagu soo dhigay Anders Breivik oo cadeystay in sababta uu xasuuqa u geystay ay ahayd naceybka uu u qabo Muslimiinta. Waxa uu sheegay in uu bilowday dagaal lagaga saarayo Muslimiinta ku soo duushay Yurub. Breivik ayaa wali maxkamad saaran, isagoo helay goob uu ku soo bandhigo hadalada macno darada ah ee ku dhisan qiyaaliga. Sida in Muslimiintu ay maamulaan Yurub, in xisbiyada talada haya ay doonayaan in ay wadanka Muslimiin qabsato iwm.
Ka dib weerarkii 22 July 2011 ayaa dunidu waxay ku soo baraarugtay in waxa loogu yeero argagixisada aysan geysan Muslimiinta oo keliya. Waxay ku soo baraarugeen in ay jiraan dad kale oo aysan horay uga filayn in ay qaadi karaan talaabooyin la mid ah kuwii lagu bartay ururka Al-Qaacida. Muslimiinta ayaa waxaa tooshkii laga wareejiyay dhowr isbuuc. Balse wax weyn iskama badalin aragtidii laga qabay Muslimiinta. Naceybka loo hayo iyo fikradaha qaldan ee laga aaminsanyahay Muslimiinta ayaan wax badan isbedalin.
Dhinaca kale xisbiyada cunsuriyiinta Norway ayaa dhulka galay xaga codbixinta. Dhinaca Sweden xisbiga SD ayaa isbuucyadii ka dambeeyay weerarka waxay bilaabeen olole ay isaga dheeraynayaan ficilka ninkaan. Aftida dadweynaha ayaa ka hortimid siyaasadooda balse waxay ahayd isbuucyadii hore oo keliya. SD maanta codbixintooda ama waxay joogtaa tiradii ay baarlamaanka ku soo galeen ama kor ayay u kacday. Waxaa muuqata in bulshada reer Iskaandaneeviya aysan cashar ka qaadan weerarkii Anders Breivik oo ay isku fikradyihiin xisbiyada SD iyo kuwa cunsuryiinta ee ka dhisan wadamada kale ee Yurub.
Ma isleedahay wax isbedal ah ayaa ku yimid aragtida ama siyaasada wadamada aan ku noolnahay weerarkii 22 July ka dib? Waa dood furan…
Shukri zindiko says:
Asc/ dhaman inta ilamidka ah waxan ka codsaneyna amaba an kaga baranay walalken jimcale in ad nosotabiso amaba an kadodno mawducyada kudhisan familada kalamaqan walal wayo waxanu nahay walidin murugu kujoga guryahoda tas macnahada wa arin norwey kajirta iyo midkalaba waqti umaheyno ilen wan.nu tiranyeysan nahay walal marka waxanu ka cod saneyna in ad nosoradiso hadba wixi kusokordha familida kalamaqan walalo wadna mahadsantahay ha,iarkin rux qaldan waxan kahadlay murugada igutagan o kaliya?
To Shukri Zindiko walaashay mowduuca aad rabto in lga hadlo xitaa kan meesha ku qoran saameyn ayuu ku yeelanayaa sidey ila tahay waayo wax laga hadlayaa waa ajnabi nacaybka dadka ku sifoobey sida Breivik kuwaasoo ku nool meesha aad usoo wado caruurtaada amase seygaaga marka hurdada ka kac walaashay.
Dhanka kale wax la taaban karo oo isbeddel ah iima muuqdaan. Waxaana aaminsanahay in qofka dhibka intaa la’eg geystay loo raadiyo qiil sida waa waalan yahay oo maskaxdiisu caadi ma ahayn oo marba guddi dhaqaatiir ah loo saaro waa sheeko mustaxiil ah. Cunsiriyaduna awood qarsoon oo aad u xoogan ayay ku leedahay xukuumadaha reer galbeedka waxaana taa kuu cadeynaysa sida muddo sannad ah aanan wax go’aana looga qaadan kiiskan aadka u culus.
asc ilaahy naga badbaadaiyay ayaa mahada iskaleh oslo joogay maalintaas qof walba wakhtigiisa dhaafimaayo iyo meesha aan joogay ilahaw adaa mahada iska leh aniga lkin waxan aamisanhay kuwa norway cunsuriyiinta aan kawada norway hoos ayay u dhacday lkin kawarama kuwa sweden hoos ma udhaceen mise waa kadaroo dibi dhal cml hahahaha
asc waxa la yiri nin fadhiya lagdan la fudud waxan ula jeeda qadiijo waxey tiri saameyn ayey ku yeelaneysaa mowduucaan war qof qalbigiisaba ay jiraan caruurtiisa kana welwelsan siduu ku heli lahaa oo uu ula midoobi lahaa ayaad la meel dhigeysaa qof sida adigoo kale iyo walalkeen jimcalaba oo ay la joogan caruurtooda inta looga sheekeyn laha wax norway ka dhacey waxa ay farxi laheyd in loo soo gudbiyo wararka quseeyo isu keenida waayo ma ahan kaliya hooyada kor ku xusan ee waxa jira intaa in ka badan oo maanta booqda websatekan kana fiiriya oo kaliya maxa laga yiri arimihii familyada marka jimcaale walal isku day in aad u raadiso sidii warar dheeraad ah ugu heli laheyd awalba adiga qalbigooda u dajin jiray run ahaantii dadaal badan ayaa sameysay taariiqda ayaana ku xusi doonto ajar badana xag allaah ayuu kuu jiraa marka waxan kaa codsaneynaa in hooyooyinka ay ka maqan yihiin aad u dadaasho wad mahadsan tahey
axmed sxb alx dheh ilahay ayaa ka badbaadiyay ee waa runta naf walba way dhadhaminaysa malaga lkin adigu ma meesha ayad u dhawayd mise
Qofka fikirkiisa cabira ma ahan in laga daba hadlo waa fikirkiisa,
laakiin mid ogaada Jimcaale waaa dadaaley waxii jira uun buu wax ka soo qori karaa.
wadsalaamantihiin dhamaan dadka kuxiran boggaan iyo jimcaale waxaa wanaagsan indadku ay kawarbixiyaan hadba waxa laga hadlayaayo waayo jimcaale asagaa hogaamiya boggaan waana sida manhaj ookale inlaga leexdo mawanaagsana hadii qofku suaal qabo waa gooni lkn aan iskudayno inaan qada dhigno hadba waxa laga hadlayo oo miiska usaaran bogga hadaan usoonoqdo mowduuca waa arin jirta in cunsuriyadu ay soobadanayso dalalkaan yurub lkn inta sogalootigu joogo yurub way jirayaan marka waxaa wanaagsan siloogu arko inayyihiin dad aan laqabsan karin aduunkaan casrigaah waainaan fojignanaa oon hagaa jinaa habdhaqankeena anogoon katagayn dinteena iyo dhaqankeena suuban mahadsanidiin